Yaa guulo badan kooxaha Chelsea iyo Man United kahor kulankooda caawa? – Gool FM
Dajiye February 17, 2020
(London) 17 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa eegeysa inay wadada guusha Premier League dib ugu soo laabato marka ay caawa oo Isniin ah u safrayaan garoonka Stamford Bridge, halkaasoo ay ku wajahaan Chelsea.
Red Devils ayaa dhibco lumisay waxaana ay fadhisaa kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League kaddib markii ay hal kulan guul gaareen shanteedii kulan ee ugu dambeysay horyaalka, waxaana ay lix dhibcood ka dambeeyaan booska afaraad oo ay ku jirto Chelsea.
Man United ayaa barbaro gool la’aan ah la gashay Kooxda Wolverhampton Wanderers kulankeedii ugu dambeeyey ee horyaalka ka hor inta aan la aadin fasaxa jiilaalka, laakiin Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa horay u garaacday Blues labo goor xilli ciyaareedkan ka hor kulankooda caawa.
Kulanka caawa garoonka Stamford Bridge ku dhax maraaya kooxaha Chelsea iyo Man United ayaa noqonaya kulankoodii 115-aad ee taariikhdooda.
Kooxahan ayaa horey isku arkay 114 kulan, waxaana guulo badan kooxda Manchester United, oo afar badis dheer naadiga reer London ee Blues.
Haddaba halkaan hoos ka eeg tirakoobyada labadan kooxood:
Chelsea ayaa badisay: 37 kulan
Man Utd ayaa guuleysatay: 41 kulan
Waxa ay barbaro galeen: 36 kulan
Chelsea ayaa dhalisay: 149 gool
Man Utd ayaa dhalisay: 168 gool.